10 Sababood Oo Aad Ujeceshahay Jihaynta Hoggaanka Jiilka | Martech Zone
Haddii aad ku lug leedahay urur kasta oo B2B ah, waxaad si dhakhso leh u baran doontaa jiilka hoggaamintu waa qayb muhiim u ah ganacsiga. Dhab ahaan:
62% ee xirfadlayaasha B2B waxay yiraahdeen kordhinta mugga hogaamintooda ayaa ah mudnaanta koowaad.
Baahida Gen Report
Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ma fududa in la soo saaro horseedyo ku filan oo damaanad qaadaya dib-u-deg deg ku soo noqoshada maalgashiga (ROI) - ama faa'iido kasta, arrintaas.
Goorma 68% ganacsiyada la soo sheegay inay la halgamayaan jiilka hogaanka, iyo mid kale 61% ee dadka suuqgeynta B2B waxay u maleynayaan in jiilka hogaamintu yahay caqabadda ugu sareysa.
Taasi waa meesha jiilka hogaaminta ee banaanka ka soo baxa uu ka ciyaaro, hab fikirka hore ee ganacsiga oo halkaas u galiya astaantaada, dhimaysa kharashyadaada, isla markaana hesha hogaamiyaal u qalma oo kaliya. Waxaa jira sababo badan oo aad u dooneysid inaad ka baxdo jiilka hogaaminta, haddii aad isku dayeyso inaad ku ballaariso suuqyo cusub ama aad u hesho taageero dheeraad ah kooxdaada iibka.
Waana helnay. Waxaan ku dhisnay ganacsi u gaar ah jiilka hogaaminta dibadda (waxaan cabi doonnaa shaambadeenna, haddii aad rabto!). Waa kuwan 10 ka mid ah sababaha aan ugu jecelnahay sababta aan u jecel nahay ka bixitaanka dibadda ee CIENCE ee 2021 iyo sida shirkaddaadu uga faa'iideysan karto ku darista wax yar-ama wax badan-oo ah u-diridda istiraatiijiyadda jiilkaaga hoggaanka ah.
Sababta 1: Dibad baxu wuxuu helaa ROI Toos ah
Sababtoo ah kakanaanta iyo hubin la'aanta ganacsiga maanta, shirkado badan oo B2B ah ayaa doorta jiilka hogaanka u baxa si ay u helaan ROI-da tooska ah. Halkii aad ka sugi lahayd natiijooyinka soo-galidda ee laga yaabo inay qaadato 6 ilaa bilaha 12 (ama ka sii dheer!) khadka hoose, waxaad ka heli kartaa soo laabasho dhakhso leh adeegyo jiil hogaamin ah qiime aad uga hooseeya.
Ka fikir taas - guud ahaan waxaa jira sicir sarreysa oo loogu talagalay iibka gudaha (heerka iskaa wax u qabso waa 16%; qasab la'aan badanaa waa ka sareyso) in aan la xusin kharashka kaligiis xoog lagu kireysto kooxda jiilka hogaaminta gudaha (runti waa khabiiro ku xeel dheer arimahooda) si loo hubiyo dab-damis ROI ah. Haddii aad joojiso inaad tixgeliso kharashka ku baxa sameynta istiraatiijiyadda jiilka dibadda ee kuu gaarka ah, ROI ee Dib u bixinta SDR wuxuu noqdaa xal aad u macquul badan.
Jiilka hogaaminta dibadda ayaa kufiican beegsiga bartilmaameedyada aad rabto inaad ganacsi la sameyso. Marka la eego xaqiiqda ah inaad sii cayimi karto halkaan, ka dibna si toos ah u sifeynta wax soo saarka (badanaa qaab ahaan shirar la qabtay), waxaa jira xisaab cad oo cad si loo go'aamiyo soo noqoshada maalgashiga. Waxay noqon kartaa qaaciddada ugu nadiifsan kanaal kasta oo suuqa tag oo aad qaadan karto.
Sababta 2aad: Kordhinta Soo-gaadhista Sumaddaada
Ma ogtahay in macaamiisha badankood - boqolkiiba 80 iibsadayaasha (sida ay 2018 Google SERP daraasad) - miyaad soo qaadan doontaa sumad caan ah marka aad ka raadineyso alaabada internetka, iyadoon loo eegin hadday ugu horreyso natiijooyinka mashiinka raadinta?
Isbeddelku isma beddelayo dhacdooyinka iibsiga B2B. In kasta oo dadku maalmahan aad ugu xeel dheer yihiin cilmi-baaristooda iyo aqoontooda, haddana wacyiga sumaddu weli waa qaybta ugu muhiimsan ee ku siinaysa gees-ka-tartankaas oo dhisaysa daacadnimada astaantaada.
Adeegyada jiilka hogaaminta ee banaanka ayaa ku siin kara khabiiro horumarineed oo iib ah kuwaas oo dhigi kara fariinta saxda ah ee bixitaanka meesha aad u baahan tahay - laga bilaabo xayeysiinta iyo wicitaanada taleefanka illaa iimaylka suuqgeynta iyo isgaarsiinta khadka tooska ah - si aad u ogaatid sumaddaada iyo rajadaada ku xiran. Waxaad asal ahaan ka helaysaa "fiidmeerta" si aad u kordhiso soo-gaadhista sumaddaada-xalka weyn-slam ee dhisi kara kalsoonida astaantaada oo ugu dambayntiina ku heli kara natiijooyin wanaagsan.
Sababta 3aad: Waxay taageertaa Ololeyaal Suuq-geynaya Kanaallo badan
Sida laga soo xigtay shirkadda 'CIENCE's VP of Sales', Michael Maynes, istiraatiijiyadda ugu wanaagsan ee fidinta bulshada ayaa ah multi-channel mid. Laakiin iyada oo wadiiqooyin badani halkaas yaalliin, sidee baad u fulin kartaa olole ballaadhan oo ka bixitaan badan oo kanaal ah si aad u gaarto yoolalka aad rabto? Ganacsiyadu waxay si joogto ah u raadinayaan tigidhkaas dahabiga ah ee shaqeynaya. Laakiin maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato dhowr tikidhada dahabiga ah si aad u gaarto dhagaystayaashaada bartilmaameedka ah iyo wixii ka baxsan?
Hirgelinta istiraatiijiyadeed ee olole kaabayaal fara badan ayaa noqon kara khiyaano-waqti-badan iyo kheyraad badan, waxaad u baahan tahay xeelado taxaddar leh iyo abaabul si aad ugu guuleysato himilooyinkaas. Taasi waa halka ay ka timaado istaraatiijiyad jiil hoggaamineed oo gacan ka baxsan ah-si ay kuugu qaadaan culeyska culus.
Jiil hogaan adag oo dibada ka yimid ayaa kaa caawin kara inaad ka faa'iideysato dariiqyada dibedda ee aadka loo bartilmaameedsado iyo in laga dhiso xogta ilo badan, ka dibna la taabto marinno cusub si looga daba tago kuwa hoggaanka u qalma. Marabtaa inaad joojiso sugitaanka gudaha si aad u aragto natiijooyinka? Maal gasho olole suuq-geyn ah oo iskuxir ah kanaal badan oo awood u siiya labadaba.
Sababta 4aad: Kordhinta Is-beddelka Gudaha
Ma ogtahay in dibedda loo baxo ay door muhiim ah ka ciyaarayso xiritaanka heshiisyada soo gala? Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay a 2019 CIENCE daraasad, boqolkiiba 17% oo muhiim ah heshiisyada soosocda ee xirmay waxay ahaayeen kuwa dibada lagaa caawiyay. Waxaan ugu yeernaa saameyntan caawimaad dibedda, ama boqolkiiba horseedyada soo-galidda (ama horseedyada soo-noqoshada ee la beddelay) oo markii hore lagu bartilmaameedsaday kanaal dibedda uga baxa, sida wicitaan taleefan ama fariin iimayl ah, taas oo keentay heshiisyo soo-gal ah.
Maaha wax lala yaabo in dibedda loo baxo ay noqotey fure muhiim u ah heerka guusha ee soo galida sababahan awgood:
Wuxuu u fidiyaa macaamiisha ereyga ku saabsan wax soo saarkaaga iyo adeegyadaada
Waxay kordhisaa wacyiga ku saabsan xalalka ay meheraddaadu bixiso
Waxay ku siinaysaa sumaddaada ama shirkaddaada soo-gaadhis dheeraad ah
Waxay soo jiidataa booqdayaal badan oo ku jira websaydhkaaga
Maaha wax aan caadi ahayn in rajooyinka isku xigxiga ay dib ugu soo noqdaan astaantaada markii ay suuqa ugu jiraan xal sidaada oo kale ah (ka fikir tan inay la mid tahay dib u habeyn).
Sida dariiqa tooska ah ee loogu dhowaado himiladaada bartilmaameedka, habab bannaanka ayaa ka faa'iideysanaya fursadaha beddelaadda iyo taageerada hoggaamiyeyaasha soo gala
Sababta 5: Si Dhab Ah U Bartilmaameed U Ah ICP-gaaga iyo Qofka Iibsanaya
Shirkadaha B2B waa inay waqti fiican ku qaataan bilowga wareegga iibka iyo ololaha suuqgeynta si ay u horumariyaan astaan ​​macmiil oo fiican (ICP) oo bartilmaameedsada qofka isticmaala. Laakiin ka warran haddii aad haysato ilo dhaqaale ama aad u yar tahay khibrad si aad u abuurto tilmaamo lagu maareeyo geeddi-socodka jiilkaaga hoggaaminta?
Adiga oo gacan ka siinaya jiilka hogaaminta, waxaad ku dadajin kartaa habka cilmi baarista xirfadlayaal tababaran oo adeegsada sirdoonka iibka si ay ugu fiican u go'aamiyaan ICP-gaaga iyo qofka iibsadaha. Ganacsigaagu wuxuu markaa dejin karaa istiraatiijiyad suuq geyn adag oo ku saleysan shuruudahan:
Macluumaadka Macaamiil ee Fiican (ama ICP)) - Tani waa sharraxaad dhammaystiran oo shirkad ay u badan tahay inay kuu noqoto macaamiishaada xigta. Waa inaad u abuurtaa ICP gaar ah olole kasta oo suuq-geyn dibadeed ah si aad ugu adeegsato hagitaan raadinta hoggaamiyeyaal tayo sare leh.
Iibsade Persona (ama BP) - Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad fahamto iibsadayaashaada mustaqbalka oo aad la xiriirto hoggaamiyeyaashaas marxalad kasta oo ka mid ah masafka iibkaaga. Tan waxaa ka mid ah macluumaad ku saabsan astaamihii hore, kuwa jira, iyo kuwa suurtogalka ah ee dabeecadaha nafsiyeed, iibsashada caadooyinka, iyo qaababka habdhaqanka.
Khabiirada jihada hogaaminta ee dibada waxay leeyihiin faham qoto dheer oo ku saabsan cidda ay yihiin macaamiishaadu iyo cidda aysan ahayn-waxaad heli doontaa khabiiro cilmi baaris ah oo u dhisi kara xog gaar ah shirkadaada si ay u ansaxiyaan shuruudaha hogaaminta ayna u fuliyaan istaraatiijiyadaada banaanka.
Sababta 6aad: Aqoonsiga Go'aamiyeyaasha
Istaraatiijiyadda jiilka hogaaminta, gaaritaanka go'aan qaadayaasha ayaa ah mudnaanta koowaad. Jiilka hogaaminta wanaagsan wuxuu ku saabsan yahay raadinta iyo la hadalka dadka saxda ah, laakiin sidee ku ogaan kartaa sida saxda ah ee loo bartilmaameedsado ama xitaa loo ogaado halka laga helo? Iyadoo celceliska tirada dadka on a kooxda wax iibsiga ee 6.8, waa maxay suurtagalnimada inaad awood u yeelato inaad kala saarto cidda masuulka ka ah:
Ku wadida dadaallada wax iibsiga ee loogu gudbinayo ururkooda
Xidhitaanka heshiisyada ganacsiga
Dibadbax khibrad leh oo SDR ah ayaa khariidayn kara ururada isla markaana aqoonsan kara kuwa go aanka gaadha, oo leh xirfadaha gorfaynta si loo kala saaro hogaamiyaasha wanaagsan iyo kuwa xun. Adoo adeegsanaya SDRs si ay u bilaabaan wada hadalada rajooyinka uqalma, ballamada waxaa lala qadan karaa kuwa ugu go'aanka gaara go'aan qaadashada, iyadoo laga takhalusayo waqtiga lumay ee saameyn ku yeelan kara wax soo saarka kooxdaada.
Sababta 7aad: Wuxuu taabtaa Suuqyo Cusub
Iyada oo suuq geyn, xeeladaha jiilkaaga hogaamintu waxay inta badan ku meeraystaan ​​helitaanka dhagaystayaal gaar ah oo la beegsanayo si ay u eegaan waxyaabaha aad ka kooban tahay - kuwaas oo marar badan kaa ilaaliya inaad ku ekaato niche. Laakiin dibedda, waxaad soo jiidan kartaa suuqyo cusub oo xitaa tijaabin kartaa kuwa cusub inta lagu jiro wareegga iibka.
Qorshaha suuq-geynta jiilka jihada ka baxsan ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara oo keliya in aanu gaadhin bartilmaameedkaaga bartilmaameedka ah laakiin uu gaadho suuqyo cusub sidoo kale. Iyada oo ay ku jiraan ciidan takhasus gaar ah u leh dibedda si ay u hoggaamiyaan kharashka, waxaad awoodi doontaa inaad ku ballaadhiso hoggaamintaada qaab-dhismeedka dadka cusub iyo goobaha juqraafiyeed.
Dibad bixintu sidoo kale waxay ufiican tahay tijaabinta suuqyada cusub halkaasoo aad jawaab deg deg ah uga heli karto suuqa isla markaana aad ula qabsan karto SDR-yadaadu waxay ku siin karaan aragti qiimo leh waxa (iyo waxa aan ahayn) ee ka shaqeynaya istiraatiijiyadda ololahaaga.
Sababta 8aad: Wuxuu Aadaa Suuqa Si Deg Deg Ah
Soo-galista, dhacdooyinka, xiriirka dadweynaha, kanaalka lamaanaha, kobaca wax soo saarka (PLG), ama isku-xirnaanta ku-xirnaanta suuq-geynta suuqa dhammaantood waxay qaadanayaan waqti. In kasta oo xeeladahaasi ay noqon karaan qaybo xoog leh oo ku saabsan yoolalkaaga guud ee ganacsiga, haddana waqti badan ayey ku qaadataa horumarinta. Jiilka hogaaminta dibadda, dhanka kale, wuxuu ugu fiican yahay beegsiga hogaamiyaasha tayada sare leh ee laga yaabo inay diyaar u yihiin inay iibsadaan alaabadaada ama adeeggaaga, taas oo kuu ogolaaneysa inaad si dhakhso leh suuqa u aado.
Dheeraad ah, awoodda lagu horumariyo a faa'iidada dhaqaajiyaha koowaad maskaxda saamileyaasha go'aanka ee xisaabaadka bartilmaameedka ayaa dhab ahaantii fure u ah xukunka iibka iyo hoggaaminta suuqa dhabta ah. Dejinta ajendaha iyo jaangooyooyinkaba sida loo iibsadayaashaada ugu habboon waa in inaad ka fikirto wax soo saar ama adeeg sidaada oo kale ah waa sida shirkadaha caqliga badan ay u kala soocaan.
Kordhinta cabbirka mashiinka suuq geyntaada oo leh raadad dheeri ah oo la soo saaray ayaa ku dari doona fursado dheeri ah dhuumahaaga iibka, taas oo u turjumi doonta heshiisyo badan oo xiran oo xawaareynaya wareegga iibka. Adiga oo gacan ka siinaya jiilka hogaaminta, waxaad diirada saari kartaa istiraatiijiyad dhaqso-suuq-suuq ah oo kordhinaysa iibka isla markaana suurtogal ah inay kordhiso dakhliga.
Sababta 9: Waxay u dejisaa Kooxdaada Iibinta Guul
Guusha kooxdaada waxay si weyn ugu tiirsan tahay dhuumaha iibka caafimaadka qaba. Adoo u diraya koox ka kooban SDRs karti leh si loo helo hogaamiyaashaas u qalma, waxaad si wax ku ool ah ugu xoojin kartaa kooxdaada iibka guriga si ay diirada u saaraan howlaha aasaasiga ah ee leh kororka waxtarka iyo guusha. Markaad kobciso hogaamiyaashaada, waxaad ku kordhin kartaa fursadaha iibka ugu yaraan 20%, sida laga soo xigtay Baahida Gen Report.
Tani waxay ugu dambeyntii xoojin doontaa iskaashiga iyo kalsoonida ka dhaxeysa iibka iyo suuqgeynta. Waxay sidoo kale awood kuu siineysaa inaad dhisto urur iib ah oo takhasus gaar ah leh - kaas oo si aad ah ugu xiran heerka sicirka wanaagsan - halkaas oo aad ku leedahay maamulayaasha iibka inay diirada saaraan xiritaanka halkii sahaminta. Celcelis ahaan, wakiillada iibka ayaa kharash gareeya kaliya 26.6 boqolkiiba waqtigooda ay ka iibinayaan macaamiisha (13 saacadood asbuucii).
In kasta oo kooxaha jiilka hoggaanka ka baxsan ay diiradda saari karaan horumarinta hoggaaminta, dejinta ballanta, iyo gaadhista qabow, koox iibka guryaha ka mid ah ayaa waqti badan ku qaadan kara beddelidda hoggaamiyeyaashan tayada sare leh iyo xidhitaanka heshiisyada-istaraatiijiyad guul-guul u ah dhammaan dhinacyada.
Sababta 10: Aan kuu yeerno Toogashada
Soo galitaan ahaan, waxaad heleysaa waxaad hesho, laakiin dibedda, waxaad helaysaa qofkaad rabto.
Trish Bertuzzi, Kooxda Bridge
Mantradayda. Shirkaduhu waxay bilaabayaan inay ogaadaan in jiilka hogaaminta ee banaanka ka soo baxa ay dhab ahaantii tahay hab la isku halleyn karo oo ka jaban si aad dib ugu hesho maalgashigaaga oo aad u wanaajiso wareegga iibka. Laakiin intee in le'eg ayaad gacanta ku haysaa markaad ka baxdo jiilka hoggaaminta?
Sida adeegyada kale ee aad adigu bixi karto, sida naqshadeynta websaydhka, warbaahinta bulshada, ama xayeysiiska lacag-gujinta ah (PPC), halkan ayaa ah meesha cilmi-baaristaada si aad u hesho adeeg jiil hoggaamineed tayo leh runti muhiim tahay. Helitaanka adeegga jiilka saxda ah ee bixitaanka macnaheedu wuxuu yahay waxaad lahaan doontaa xakameyn badan sidaad u yeelan lahayd haddii SDRs ay xafiiskaaga fadhiyaan oo ay si toos ah adiga kuugu shaqeynayaan.
Iyada oo shirkad jiil hoggaamineed dibadda ah, waxaad eegi kartaa dhammaan ololayaashaaga B2B waxaadna hubin kartaa inuu jiro tartiib tartiib tartiib ah tayada hoggaankaaga. Natiijooyinkaaga waxaa lagu muujiyey warbixinno faahfaahsan oo ka dhan ah cabbiraadaha aad kormeeri karto - waxaad yeelan doontaa xakameyn buuxda si aad u aragto sida dhabta ah ee ololayaashaadu u socdaan iyo haddii kooxdaada fidinta ay ku guuleysatay (ama ku fashilantay), isla markaana aad sameysid wax ka beddel deg deg ah oo sida ugu habboon kuugu habboon. ganacsi.
Hesho Faa'iidooyinka Dib-u-habeynta Jiilka Lead
In kasta oo xeeladaha suuqgeynta qaarkood ay sifiican uga shaqeyn karaan gudaha, shaqooyinka kale ee kuu sababi kara madax-xanuun badan-iyo lacag-ka wanaagsan kuwa wanaagsan, sida soo saarista hoggaamiyeyaasha dibedda, waxaa ugu wanaagsan ee loo daayaa khubarada SDR oo iyagu si wax ku ool ah u fulin kara.
Mar dambe kuma cusbayn suuqleyda, u hoggaansamida jiilka hoggaamintu wuxuu noqday qayb muhiim u ah ganacsiga oo leh qiime la xaqiijiyay iyo soo-celin caafimaad leh. Iyada oo qayb ka ah habka suuq-geynta isku-dhafan, waxaad awoodi doontaa inaad adeegsato istaraatiijiyado jiil oo dibadda ah si aad u xaqiijiso una kobciso shirkaddaada awooddeeda oo dhan.
Qabso Kulan leh CIENCE
Tags: b2bsuuq geynta b2bbpQofka iibsadacaanogo'aan qaadashoicpprofile macaamiisha fiicanhogaaminta genjiilka ledjiilka hogaanka u baxasuuq geyn dibedda ahhoggaanka dibaddajiil hogaamin ah-keeniddadejinta ballanta iibkasdrbixinta sdr